1 Ahene 22:1-53
22 Na wɔtenaa hɔ mfe abiɛsa a akodi amma Siria ne Israel ntam. 2 Na ɛbae sɛ afe a ɛto so abiɛsa mu no, Yuda hene Yehosafat+ kɔɔ Israel hene nkyɛn. 3 Ɛnna Israel hene ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Munnim sɛ Ramot-Gilead+ yɛ yɛn dea? Nanso yɛn de, yɛte hɔ komm a yennye mfii Siria hene nsam.” 4 Na asɛm a obisaa Yehosafat ne sɛ: “Wo ne me bɛkɔ Ramot-Gilead so ne wɔn akɔko+ anaa?” Ɛnna Yehosafat ka kyerɛɛ Israel hene sɛ: “Me ne wo nyinaa yɛ onipa biako. Me man ne wo man nso yɛ biako.+ M’apɔnkɔ ne w’apɔnkɔ yɛ biako.” 5 Na Yehosafat san ka kyerɛɛ Israel hene sɛ: “Sɛ ɛbɛyɛ a, anka bisa+ Yehowa anom asɛm ansa.” 6 Ɛnna Israel hene boaboaa adiyifo no ano,+ mmarima bɛyɛ ahanan, na obisaa wɔn sɛ: “Me ne Ramot-Gilead nkɔko, anaa minnyae?” Na wɔkae sɛ: “Kɔ,+ na Yehowa de wɔn bɛhyɛ ɔhene nsa.” 7 Ɛnna Yehosafat bisae sɛ: “Yehowa diyifo foforo biara nni hɔ bio anaa? Momma yɛmfa no so mmisa.”+ 8 Na Israel hene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Obiako da so wɔ hɔ a yebetumi afa no so abisa Yehowa,+ nanso me de, mempɛ n’asɛm+ koraa efisɛ ɔnhyɛɛ me ho nkɔm pa bi da, na bɔne nko ara+ na ɔka. Ɔne Yimla ba Mikaia.” Nanso Yehosafat ka kyerɛɛ no sɛ: “Mma ɔhene nnka saa.”+ 9 Ɛnna Israel hene frɛɛ ahemfie mpanyimfo+ no bi, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔfa Yimla ba Mikaia bra ntɛm.”+ 10 Saa bere no, na Israel hene ne Yuda hene Yehosafat tete wɔn nhengua so hyehyɛ wɔn ntade+ wɔ Samaria kurow pon ano awiporowbea hɔ, na adiyifo no nyinaa gyinagyina wɔn anim reyɛ wɔn adiyifo adwuma.+ 11 Na Kenaana ba Sedekia yɛɛ dade mmɛn, na ɔkae sɛ: “Nea Yehowa aka ni,+ ‘Eyi na wode bɛpempem Siriafo no de akosi sɛ wobɛtɔre wɔn ase.’”+ 12 Adiyifo nkae no nyinaa nso hyehyɛɛ nkɔm koro no ara sɛ: “Kɔ Ramot-Gilead so na kodi nkonim, na Yehowa de wɔn bɛhyɛ ɔhene nsa.”+ 13 Na nea wɔsomaa no sɛ ɔnkɔfrɛ Mikaia mmra no ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Adiyifo no nyinaa de nokoro aka asɛmpa akyerɛ ɔhene, enti ma w’asɛm nyɛ sɛ wɔn de no, na ka asɛmpa.”+ 14 Nanso Mikaia kae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase+ yi, nea Yehowa bɛka akyerɛ me no, ɛno ara na me nso mɛka.”+ 15 Bere a obeduu ɔhene anim no, ɔhene bisaa no sɛ: “Mikaia, yɛne Ramot-Gilead nkɔko, anaa yennyae?” Ɛhɔ ara na obuaa ɔhene sɛ: “Monkɔ na munkodi nkonim, na Yehowa de wɔn bɛhyɛ ɔhene nsa.”+ 16 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Mpɛn ahe na memma wonkaa ntam sɛ nokware nkutoo na ka wɔ Yehowa din mu kyerɛ me?”+ 17 Ɛnna ɔkae sɛ: “Hwɛ, mihu Israel sɛ wɔabɔ wɔn nyinaa ahwete+ wɔ mmepɔw no so sɛ nguan a wonni ɔhwɛfo.+ Na Yehowa aka sɛ: ‘Eyinom nni wura. Enti ma obiara nsan nkɔ ne fie asomdwoe mu.’”+ 18 Ɛnna Israel hene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Ɛnyɛ asɛm a mekae no na ɛda hɔ yi, sɛ ‘ɔrenhyɛ me ho nkɔm pa bi, na mmom nkɔm bɔne’?”+ 19 Na odiyifo no toaa so sɛ: “Enti tie nea Yehowa wɔ ka:+ Mihu Yehowa sɛ ɔte n’ahengua+ so a ɔsoro asafodɔm nyinaa gyinagyina ne nifa ne ne benkum.+ 20 Na Yehowa bisae sɛ, ‘Hena na ɔbɛkɔ akɔdaadaa Ahab ma ɔne Ramot-Gilead akɔko na watɔ?’ Afei oyi ka sɛɛ, na oyi nso aka sɛɛ.+ 21 Akyiri yi, honhom+ bi fi begyinaa Yehowa anim kae sɛ: ‘Me na mɛkɔ akɔdaadaa no.’ Ɛnna Yehowa bisaa no sɛ, ‘Wobɛyɛ no dɛn?’+ 22 Na ɔno nso buae sɛ, ‘Mɛkɔ akɔyɛ atoro honhom wɔ n’adiyifo no nyinaa anom.’+ Ɛnna Onyankopɔn kae sɛ, ‘Wubetumi adaadaa no ampa, nea worekɔyɛ no, ɛbɛyɛ yiye.+ Enti kɔ na kɔyɛ saa.’+ 23 Enti hu sɛ Yehowa de atoro honhom na ahyɛ w’adiyifo yi nyinaa anom,+ nanso mmusu na Yehowa aka afa wo ho.”+ 24 Ɛnna Kenaana ba Sedekia twiw bɛn Mikaia bɛbɔɔ no sotɔre+ bisaa no sɛ: “Ɛhefa na Yehowa honhom nam twaa me ho ne wo bɛkasae?”+ 25 Na Mikaia buaa no sɛ: “Ɛda a wobɛhyɛn pia mu+ akohintaw+ no na wubehu baabi a ɛnam bae.” 26 Ɛnna Israel hene no kae sɛ: “Momfa Mikaia nkɔma amrado Amon ne ɔhene ba Yoas.+ 27 Na monka nkyerɛ wɔn sɛ: ‘Nea ɔhene aka ni:+ “Momfa saa akoa yi nto nneduadan+ mu, na montew n’aduan+ ne ne nsu so nkosi sɛ mɛba asomdwoe mu.”’”+ 28 Ɛnna Mikaia kae sɛ: “Sɛ wosan ba asomdwoe mu paa a, ɛnde na ɛnyɛ Yehowa na ɔne me kasae.”+ Na ɔka kaa ho sɛ: “Mo nyinaa nso muntie bi.”+ 29 Na Israel hene ne Yuda hene Yehosafat kɔɔ Ramot-Gilead so.+ 30 Ɛnna Israel hene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Mɛsakra me ho akɔ akono,+ nanso wo de, hyɛ wo ntade.”+ Enti Israel hene sakraa ne ho+ na ɔkɔɔ akono hɔ.+ 31 Ná Siria hene no ahyɛ ne nteaseɛnam so asahene aduasa abien+ no sɛ: “Mo ne akumaa anaa ɔkɛse nnko, Israel hene nko na momfa mo ani nsi no so.”+ 32 Na ɛbae sɛ bere a nteaseɛnam so asahene no huu Yehosafat pɛ, wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Ampa, Israel hene no ni.”+ Enti wɔkɔɔ no so sɛ wɔne no rekɔko. Ɛnna Yehosafat teɛteɛɛm hwehwɛɛ ɔboafo.+ 33 Enti bere a nteaseɛnam so asahene no hui sɛ ɛnyɛ Israel hene no, ntɛm ara na wogyaee n’akyi di.+ 34 Na ɔbarima bi tow n’agyan a n’ani nna, na ɛkɔwɔɔ Israel hene wɔ n’akotade no mpamee so. Enti ɔhene no ka kyerɛɛ ne teaseɛnam kafo+ no sɛ: “Dan wo nsa na fa me fi akono ha kɔ, na wɔapira me pira bɔne.” 35 Ɔko no mu yɛɛ den saa da no, na wɔde ɔhene no gyinaa teaseɛnam no mu de n’ani kyerɛɛ Siriafo no, na eduu anwummere no na wawu;+ n’apirakuru no mogya nwini guu ɔko teaseɛnam no mu.+ 36 Wɔteɛɛm kae wɔ nsra no nyinaa mu owiatɔ bere sɛ: “Obiara nkɔ ne kurow mu, obiara nkɔ n’asase so!”+ 37 Saa na ɛyɛe a ɔhene wui. Wɔde no baa Samaria, na wosiee ɔhene wɔ Samaria.+ 38 Na wɔkɔhohoroo teaseɛnam no mu wɔ Samaria abura no ho, na akraman bɛtaforoo ne mogya,+ (nguaman nso guaree wɔ hɔ), sɛnea Yehowa asɛm a ɔkae no kyerɛ.+ 39 Ahab ho nsɛm a aka, nea ɔyɛe nyinaa ne asommɛn+ fie a osii, ne nkurow a ɔkyekyee nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Israel ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 40 Na Ahab ne n’agyanom kɔdae,+ na ne ba Ahasia+ bedii n’ade. 41 Asa ba Yehosafat+ bedii Yuda so hene wɔ Israel hene Ahab afe a ɛto so anan mu. 42 Yehosafat bedii ade no, na wadi mfe aduasa anum, na odii hene mfe aduonu anum wɔ Yerusalem. Ne maame din de Asuba a ɔyɛ Silhi babea. 43 Na ɔhene no nantew ne papa Asa akwan nyinaa so, na wamman amfi ho, na ɔyɛɛ nea ɛteɛ Yehowa ani so.+ Sorɔnsorɔmmea no nko na amfi hɔ. Ɔman no kɔɔ so bɔɔ afɔre na wɔhyew afɔrebɔde wɔ sorɔnsorɔmmea hɔ.+ 44 Na asomdwoe tenaa Yehosafat ne Israel hene ntam.+ 45 Yehosafat ho nsɛm a aka, ne nnwuma akɛse ne n’akodi no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Yuda ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 46 Asɔrefie mmarima nguaman+ a wɔkae wɔ ne papa Asa bere so no, otuu wɔn ase fii asase no so.+ 47 Ná ɔhene bi nni Edom;+ amrado na odii hene.+ 48 Yehosafat yeyɛɛ Tarsis+ ahyɛn a ɔde bɛkɔ Ofir akɔfa sika, nanso antumi ankɔ efisɛ ɛsɛesɛee wɔ Esion-Geber.+ 49 Ɛnna Ahab ba Ahasia ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Ma me nkoa mmɛka wo nkoa ho, ahyɛn no mu,” nanso Yehosafat ampene.+ 50 Na Yehosafat ne n’agyanom kɔdae,+ na wosiee no kaa n’agyanom ho wɔ ne nana Dawid Kurow+ mu, na ne ba Yehoram+ bedii n’ade. 51 Ahab ba Ahasia+ bedii Israel so hene wɔ Samaria, Yuda hene Yehosafat afe a ɛto so dunson mu, na odii Israel so mfe abien. 52 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne,+ na ɔfaa ne papa kwan so+ ne ne maame kwan so+ ne Nebat ba Yeroboam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne+ no kwan so.+ 53 Ɔsom Baal,+ na ɔsɔree no, na ɔhyɛɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn abufuw+ sɛnea ne papa yɛe no ara.